I Mosesy na Môizy dia ilay lehilahy hebreo resahina ao amin' ny Baiboly fa nitondra ny Zanak' i Israely ho afaka amin' ny fanandevozana avy tany Egipta ho any amin' ny tany Kanaana izay nampanantenain' Andriamanitra. Nitondra azy ireo namakivaky tany efitra izy ka tamin' izany no nivoahan' ny Didy Folo sy ny fototry ny Lalàna nifehy ny Zanak' i Israely. Araka ny Baiboly ihany dia niampita ny Ranomasina Mena tamin' ny fomba mahagaga koa izy sy ny vahoaka notarihiny. Tsy tafita tany amin' ny tany Kanaana anefa i Mosesy fa maty teo amin' ny tendrombohitra Nebo rehefa avy nametraka ny fitarihana ny Israelita tamin' i Jôsoa (na Jôsoe).
1.2 Dikan' ilay anarana araka ny Baiboly
2 Tantaran' i Mosesy araka ny Baiboly
2.4 Ny fiampitana ny Ranomasina Mena sy ny tany efitr' i Sinay
2.5 Ny Fanekem-pihavanana tao amin' ny tendrobohitra Sinay
3 Ireo boky lazaina fa nosoratan' i Mosesy
3.1 Ny Tôrah na Pentateoka
3.2 Ny boky apôkrifa
Fanoratana ilay anaranaModifier
Ny teny hoe Mosesy, izay hita ao amin' ny Baiboly prôtestanta amin' ny teny malagasy, dia fanagasiana ny teny latina Moses izay avy amin' ny teny grika hoe Μωσῆς / Môsês. Ny hoe Môizy, izay hita ao amin' ny Baiboly katôlika amin' ny teny malagasy, dia fanagasiana ny teny frantsay hoe Moïse izay avy amin' ny teny latina hoe Moyses, izay avy amin' ny teny grika hoe Mωϋσῆς / Mousês. Na ny hoe Μωσῆς / Môsês na ny hoe Mωϋσῆς dia avy amin' ny teny hebreo hoe מֹשֶׁה / Mosheh.
Dikan' ilay anarana araka ny BaibolyModifier
Araka ny voalazan' ny Baiboly ao amin' ny Eksôdôsy (Eks. 2.10) dia nataon' ny reniny nanangana azy hoe Mosheh ny anaran' ilay zaza vao teraka satria novonjeny avy tao anaty rano (MeShTiHoW). Ny dikan' ny hoe Mosesy, araka ny Baiboly, dia "nalaina tamin' ny rano". Avy amin' ny matoanteny hoe mashah izay midika hoe "maka", "misintona aty ivelany" na "mamoaka".
Ny Jiosy dia manao azy hoe מֹשֶׁה בן עמרם / Mosheh ben Amram izay midika hoe "Mosesy zanak' i Amrama" na מֹשֶׁה רַבֵּנוּ / Mosheh Rabbenu "Mosesy Mpampianatray".
Fiforonan-teny araka ny fikarohana ankehitrinyModifier
Misy amin' ny mpikaroka ankehitriny ny mihevitra fa anarana egiptiana fa tsy teny hebreo ny hoe Mosheh. Ny hoe Mosheh dia mety ho fanononana hebreo ny tapa-teny egiptiana hoe mss izay midika hoe "zanaka", "miteraka" sns arakaraka ny fiovaovan' ny zanapeo ampiarahina aminy. Izany dia hita amin' ireo anarana egiptiana maro mitohy amin' ny anaran' ireo andriamanitra egiptiana toy ny hoe Dhwty-ms vakina hoe Djehwtymes (izany hoe i Toutmoses) ("zanak' i Djehwty" "zanak' i Thot" na "naterak' i Thot"), Ra-mssw (Ramses) ("zanak' i Râ" na "naterak' i Râ"). Mety midika hoe "zanaka" fotsiny izany ny anaran' i Mosesy. Tsy mipetaka eo ny anaran' ilay andriamanitra manjanaka azy.
Tantaran' i Mosesy araka ny BaibolyModifier
Teraka tao Gôsena i Mosesy. Zanak' i Amrama sy Iôkebeda. Isan' ny fokon' i Levy izy. Tamin' ny fotoana nahaterahany dia nisy fandripahana ny zazalahy hebreo vao teraka. Natsipin-dreniny tany amoron' ny renirano Nily (na Neily) ny lakan-kely zozoro nisy azy mba tsy ho fantatra ny maha zanaka hebreo azy (Eks. 2.4; Nom. 26.59). Rehefa tonga handro ny zanakavavin' i Farao dia nahita ilay zaza ka nampaka azy mba hatsangany ho zanany. Nataony hoe Mosesy ny anarany satria nalainy tamin' ny rano. Ny anabavin' i Mosesy izay nanara-maso azy ihany no nalain' ilay zanakavavin' i Farao hitady vehivavy hebreo ho mpitaiza ilay zazakely. Nobeazina toy ny zanaka mpanjaka i Mosesy.
Rehefa lehibe i Mosesy dia nahafantatra ny tena firazanany. Nitsidika ny toerana niasan' ny iray firenena aminy izy ka tamin' izany no nahitany ny fanandevozana sy ny fampahoriana nahazo azy ireo. Namono Egiptiana izay nampijaly Hebreo teo am-panompoana izy ka izany no nahatonga azy nandositra tany amin' ny tanin' ny Madianita. Tany amin' ny tany efitr' i Madiana i Mosesy no nifankahita tamin' ny mpisorona atao hoe Jetrô (hebreo: Yiṯrō) izay nanome azy ny zananivavy mba ho vadiny.
Indray andro raha nankeny amin' ny tendrombohitra Hôreba (atao hoe koa Sinay) izy hiandry ny biby fiompin-drafozany dia nahita ny Anjelin' Andriamanitra tao anaty lelafon' ny roimemy mirehitra nefa tsy nety levona. Avy amin' io roimemy io no nivoahan' ny feon' Andriamanitra izay nanambara taminy ny asa tsy maintsy hataony. Naniraka azy Andriamanitra mba ho any amin' i Farao hanafaka ny vahoakany avy ao Egipta. Tamin' izany koa no nahafantrany ny anaran' Andriamanitra niavian' ny hoe IHVH (Iahveh).
Ny fanafahana ny Hebreo avy ao EgiptaModifier
Nandeha tany amin' i Farao i Mosesy hanafahana ny Zanak' i Israely avy ao Egipta sy hitondra azy ireo any amin' ny tany nampanantenaina azy, dia ny tany Kanaana. Nanampy azy ny rahalahiny Aarôna (hebreo: Aharone) sady nanao fahagagana maro izy hihainoan' i Farao azy izay nangatahany mba hamela ny Zanak' i Israely hankalaza ny Paska any an' efitra. Tsy nanaiky i Farao (Eks. 7. 8-13) sady vao mainka nanamafy ny fampahoriany ny Hebreo. Izany fandavana izany no niteraka ireo loza folo tao Egipta dia:
ny niovan' ny ranon' i Nily ho ra (Eks. 7.14-23);
ny niovan' ny vovoka tamin' ny tany ho moka marobe (Eks. 6.12-15);
ny nidiran' ny lalitra tsy hita isa tao an-tanàna (Eks. 8.16-28);
ny nisian' ny areti-mandringana nahazo ny biby fiompy (Eks. 9.1-7);
ny vay nahazo ny olona sy ny biby fiompy (Eks. 9.8-12);
ny havandra nandrava sy namono (Eks. 9.13-35);
ny nahafatesan' ny voalohan-teraky ny biby sy ny olona (Eks. 11.1-10; 12.29-32).
Maty zanaka i Farao vao izay namela ny Hebreo hivoaka an' i Egipta. Noho ny hamehana dia nitondra mofo tsy misy masirasira izy ireo ka izany no tsaroan' ny Jiosy taty aoriana isaky ny andro Paska ho fahatsiarovana io fivoahana an' i Egipta io.
Ny fiampitana ny Ranomasina Mena sy ny tany efitr' i SinayModifier
Rehefa tonga teo akaikin' ny Ranomasina Mena ny Hebreo dia nahatazana ny miaramilan' i Farao nanenjika acy ao aoriana. Io ranomasina io dia atao hoe Yayam-Souf "Ranomasin' ny Bararata" amin' ny teny hebreo. Tamin' izany no nanandratan' i Mosesy ny tanany hampisaraka ny ranomasina ho roa hahafahan' ny Hebreo miampita. Nanenjika ireo miaramila ireo nefa maty tao anaty ranomasina izay nikombona indray sy nanafotra azy ireo (Eks. 16.15-31).
Rehefa tonga tao an-tany efitra ny Hebreo notarihin' i Mosesy dia nisedra ny olan' ny tsy fisian-kanina sy ny tsy fisian-drano ary ny fahafatesana vokatry ny kaikitry ny bibilava. Namaha izany olana izany Andriamanitra amin' ny fanomezana azy ireo ny mana sy ny papelika sy ny menarana varahina ary ny rano avy amin' ny vatolampy nokapohin' i Mosesy amin' ny tehiny.
Ny Fanekem-pihavanana tao amin' ny tendrobohitra SinayModifier
Telo volana taorian' ny nivoahana an' i Egipta dia tonga tao amin' ny tany efitr' i Sinay ny Hebreo. Navelan' i Mosesy tamin' i Aarôna rahalahiny ny vahoaka mba hiakarany any an-tendrombohitra Sinay. Afaka efapolo andro vao niverina i Mosesy nitondra ny vatofisaka mirakitra ny Didy Folo nomen' Andriamanitra azy izay fototry ny Fanekem-pihavanana eo amin' Andriamanitra sy ny Hebreo. (Eks. 20.1-17; Deo. 5.6-21). Hitan' i Mosesy ny tsy finoan' ny vahoaka an' Andriamanitra tamin' ny nanamboaran' izy ireo sarin' ombilahy kely volamena hivavahana. (Eks. 32.1-6). Tezitra noho izany i Mosesy ka nazerany ho vaky ireo vatofisaka nisy ny Didy Folo ireo sady nodorany ilay sarin' ombilahy. Nangataka amin' Andriamanitra i Mosesy mba tsy handao ny vahoakany ka nohavaozina tany an-tendrombohitra indray ilay Fanekem-pihavanana. Nidina avy any i Mosesy rehefa afaka efapolo andro nitondra vatofisaka hafa misy ny Didy Folo (Eks. 34.1-28).
Tsy tafita tany Kanana i MosesyModifier
Nandeha tao amin' ny tany efitra mandritra ny efapolo taona ny Zanak' i Israely vao izay tonga teo akaikin' i Jerikô. Napetrak' i Mosesy tamin' i Jôsoa (na Jôsoe) ny fitarihana ny Hebreo sady natolony ny loholona ireo vato fisaka mba hahafahan' izy ireo manohy ny fampianarana sy ny fampitandremana ny Lalàna. Maty teo an-tampon' ny tendrombohitra Nebo i Mosesy rehefa feno 120 taona.
Ireo boky lazaina fa nosoratan' i MosesyModifier
Maromaro ihany ny boky lazaina fa nosoratan' i Mosesy, ka ny boky dimy voalohany ao amin' ny Baiboly ihany no voaray ho filamatra (kanôna) ao amin' ny jodaisma sy ny kristianisma, fa ny sisa rehetra dia voasokajin' ny Jiosy sy ny Kristiana ho apôkrifa na pseodepigrafa.
Ny Tôrah na PentateokaModifier
Ny Tôrah (midika hoe "Lalàna"), izay tsy inona fa ny fitambaran' ny boky dimy voalohany ao amin' ny Baiboly, dia ataon' ny lovantsofina fa nosoratan' i Mosesy ka atao hoe "boky dimin' i Mosesy" na Pentateoka. Araka ny fitsikerana ny lovantsofina ankehitriny dia tsy i Mosesy no mpanoratra azy ireo. Ireto avy ireo boky ireo:
Eksôdôsy na Eksaody
Nomery na Fanisana
Deoterônômia na Deoterônômy.
Ny boky apôkrifaModifier
Misy koa boky apôkrifa izay mitondra ny anaran' i Mosesy:
Apôkalipsin' i Mosesy (na Fiainan' i Adama sy Eva)
Fiakaran' i Mosesy
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Mosesy&oldid=1013414"